I-Telefónica iyaqhubeka nokuchaphazeleka kulo lonke elaseSpain ngolu hlaselo lwamandla lwentlawulelo | Iindaba zeGajethi
Kubonakala ngathi akukho kuphumla kubasebenzi abajongene nokhuseleko kwinkampani yeTelefonica, esachaphazeleka koku Uhlaselo olunamandla lwe-ramsomware kwaye uthathe isigqibo sokuvala zonke iikhompyuter kwikomkhulu lakhe ukunqanda ububi obukhulu. Ngokomgaqo, olu hlaselo luchaphazela iinkampani ezininzi ngokwemithombo ethile yemithombo yeendaba, lubangela iingxaki zokwenyani kumqhubi osele eyibonile inethiwekhi yangaphakathi iyachaphazeleka kolu hlaselo luvela eChina okanye eRashiya. Akukho datha ithile kule nto kodwa eyona ngxaki iphambili ayisiyiyo apho uhlaselo luvela khona, kodwa ubukhulu balo kunye imeko yokhetho lobuchwephesha ukuba inkampani kuye kwafuneka ikhuphe isigqibo.
Zonke iinkqubo zokhuselo zenziwe zasebenza, kwaye basebenza kangangoko ukuthintela uhlaselo olunokwenzeka kunxibelelwano lwezinye iinkampani ezinkulu eziqala ukuthatha amanyathelo afanayo nalawo eTelefonica ngokungathi ichaphazelekile kwaye icima iikhompyuter zayo ukunqanda umngcipheko. . Ngokwenyani kuphela kwento enokwenziwa ngaphandle kokugcina idatha efini lolu hlobo lokuhlaselwa ungagcina idatha okanye inxalenye yayo, Kuxhomekeke kakhulu kubungakanani bale ntlawulelo.
Okwangoku siyacaca ukuba Le cyberattack ayichaphazeli abasebenzisi okanye iinkonzo zenkampani ngaphaya kwenethiwekhi yayo yangaphakathi. Okwangoku, oyena nobangela uphambili kolu hlaselo lwenziwa ngabaphuli-mthetho yimali kwaye intlawulelo yokuqala ithetha malunga neerandi ezingama-330 eziza kuhlawulwa kwiiBitcoins ezinokuphindaphindeka ukuba azihlangabezani nemigaqo yentlawulo emiselweyo kwaye enokuthi ekugqibeleni ibangele ilahleko yedatha ebhalwe ukuba intlawulo ayenziwanga.
1 Vala zonke iikhompyuter
2 Cima iVPN
3 Linda, sebenza kwaye ufumane izisombululo
Vala zonke iikhompyuter
Esi ibisisiqalo kwaye inyathelo kuphela elithathiweyo yinkampani ukuthintela inani leekhompyuter elosulelekileyo ukuba lonyuke. Ke ngoku zonke iikhompyuter zeTelefonica kwinqanaba likarhulumente zinqanyuliwe. Inkampani ikhuphe ingxelo yangaphakathi (efanayo nale siyishiya apha ngezantsi) apho bonke abasebenzi baceliwe Sikhulule isixhobo sokuvala kwaye sivale izixhobo kude kube kukwazisa kwakhona. Kubalulekile ukuba ikhompyuter yakho okanye i-smartphone iqhagamshelwe kwinethiwekhi ye-WiFi okanye ukuthintela le ntsholongwane ekuqhubekeni nokusasazeka, ke ukucinywa ngokupheleleyo kweekhompyuter kunye nezixhobo kuceliwe.
Elinye inyathelo elibalulekileyo elithathiweyo ukunqanda ukusasazeka kwentsholongwane yekhompyuter yile Ukuqhawula iiVPN. Ezi VPNs zisetyenziselwa ukuba iinkampani ezixhumeke kwinethiwekhi yeTelefonica azichatshazelwa yintsholongwane.
Ii-VPNs ziinkonzo ezivumela ukufikelela kude kwi-intranet okanye uthungelwano lwangaphakathi iinkampani kwaye ke kungcono ukuba unqamle ukuthintela ukusasazeka kwintsholongwane. Abathengisi beminxeba bangaphandle bakude kwikomkhulu lenkampani, kodwa ukuba banxibelelana neVPN, banokufumana malware.
Linda, sebenza kwaye ufumane izisombululo
Okwangoku kufuneka behle baye emsebenzini ukugcina yonke idatha abanokuyithemba kwaye banethemba lokuba umda wentlawulelo awukhulu kakhulu. Sicinga ukuba iinzame zokulwa nolu hlaselo ziyaqhubeka nokuxhalaba kwaye ke kufuneka silinde izibhengezo ezisemthethweni. Ngaphezu kwakho konke yiba nomonde, sebenza ukulungisa ingxaki kwaye ungathathi ilaptop okanye ikhompyuter ekhaya ukuze uqhubeke nomsebenzi ekhaya, kuba inokusasaza intsholongwane ngakumbi.
Esi sisibetho esinzima kwiTelefonica kwaye kuyakufuneka ukubek'esweni ngokusondeleyo izigqibo ezenziwe ngumsebenzi waseSpain otshintshiweyo ngolwesiHlanu ngulo hlaselo lwamandla olunamandla olunokuthi ngokuchaphazela ezinye iinkampani ezinje ngeGesi yendalo, Iberdrola, BBVA ebonakala ngathi aluphike uhlaselo oluvela kwiinethiwekhi zentlalo okanye iBanco Santander. Ngamafutshane uhlaselo olubeka onke amaziko ezemali kunye neenkampani elizweni obone umsebenzi wayo wesiqhelo unqanyulwe kolu hlaselo lunamandla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-Telefónica iyaqhubeka nokuchaphazeleka kulo lonke elaseSpain ngolu hlaselo lwamandla olunamandla
UAlexis Santana sitsho
Pos na, iyakuchukumisa ukunyuka kwamaxabiso ukunciphisa ilahleko ... .. masingalibali ukuba lixesha lexesha
Phendula kuAlexis Santana